Shan ruux oo isku qoys ah oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay magaalada Muqdisho. – Radio Daljir
Shan ruux oo isku qoys ah oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Muqdisho, July, 19 – Ugu yaraan dhan ruux ayaa oo isku qoys ah ayaa ku dhintay magaalada Muqdisho, ka dib markii uu dusha ka maray gaari nooca xamuulka qaada ah gaarigii ay la socdeen oo ahaa nooca mini-baska ah, halkaas oo shanta ruuxba ay ku dhinteen.
Sidoo kale shilkaasi waxaa ku dhaawacmay sedex qof oo ka mid ahaa dadkii gaariga yar la socday, sida ay Daljir u sheegeen dad goobta ku sugnaa.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa dhammaantood la sheegay inay ka tirsanaayeen dadka barakacayaasha ee dhawaan soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana shilka ka dib ku soo xoomay goobta dad weyne aad u naxsan.